YEYIPHI INDLELA YOKUBEKA UMGANGATHO WEENKUNI - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Yeyiphi indlela yokubeka umgangatho weenkuni
Yeyiphi indlela yokubeka umgangatho weenkuni
Isikhokelo sokuba yeyiphi indlela yokubeka umgangatho kubandakanya eyona nto ibalulekileyo yokubekwa kunye noyilo. Umbuzo oqhelekileyo obuziweyo xa ufaka kuqala umgangatho weplanga kwigumbi, yeyiphi indlela yokubeka umgangatho weenkuni. Kubalulekile ukuba unoluvo oluchanekileyo malunga nolwalathiso olufanelekileyo kwiibhodi zomhlaba kuba oku kunokuba nefuthe elikhulu kuyilo lomgangatho.
Apha ngezantsi kukho ezinye izinto onokuthi uzithathe ukuze ufezekise uyilo olukhethiweyo lomgangatho wokhuni.
Kubalulekile ukuqaphela indawo yokungena endlwini ngaphambi kokubeka Umgangatho wokhuni oluqinileyo . Xa kufakwa iinkuni kwindawo ejikeleze umnyango wangaphambili, iibhodi ezibalekayo kufuneka zilungelelaniswe ngokungqinelana nomnyango.
Kuhle ukuhamba emnyango wangaphambili kwaye ubona iinkuni ezibaleka kwicala elifanayo elikude nomnyango.
Ngale ndlela, iinkuni zihamba kunye nokuhamba kwetrafikhi ngelixa kwangaxeshanye zibonakala zilungelelaniswe njengoko ungena endlwini.
Ezi zidibaniso zomgangatho zixhasa umgangatho ongaphantsi kwaye zibaluleke kakhulu xa indlu inesitezi somthi. Uninzi lwexesha, kungcono ukuba ulwalathiso luhambe ngokungafaniyo, oko kukuthi kumgangatho wokudibanisa ukuze iibhodi zikwazi ukusika izikhewu ngelixa zinenkxaso.
Ukuthatha isigqibo sokuya kwicala elilinganayo kunye ne joists zomgangatho akuyi kubonelela ngenkxaso eyimfuneko phantsi kwezinye iinxalenye zomthi.
indlela yokugqoka isigqubuthelo
Kule meko, inokukhokelela kwisakhiwo esisezantsi ukuba sihlale phakathi kweejoists ezinokubangela ukubhabha kumgangatho nokwaphuka kwamalungu phakathi kweebhodi. Oku kuyakubiza nje ngaphezulu kuba uya kuthi emva koko ubuyisele iibhodi xa amalungu ephuka.
Thatha ingqalelo isikhokelo seebhodi zomgangatho ukuze ufezekise injongo yoyilo. Inokuba nomtsalane ngakumbi xa iibhodi zifakelwe ngendlela ecaleni kokuba iqonde ngqo kuba ubunzulu bunokongezwa kwigumbi.
Umzekelo omnye wale nto kukuba iibhodi zinokuqhutywa ngokudibanisa ukwenza imbonakalo enomdla ngakumbi.
Enye into onokuthi uyiqwalasele kukuba ube nepatheni yeherringbone. Le patheni yomgangatho wokhuni yongeza ubuhle kuyilo olwenza ukuba lubize kuba uyakufuna ukuqesha isifaki esinetalente ukuyenza.
Ukufaka iinkuni kwigumbi elithile kufuna ukuba uthathe ingqalelo kubungakanani begumbi. Kukho iimeko ezininzi esele zenziwe ukuba iibhodi zifakelwe kwicala elifanayo eludongeni olude kwigumbi.
Umzekelo, kukho igumbi elide kakhulu nelimxinwa kwaye emva koko ufake iinkuni elona donga lude kwaye oku kudala isiphumo seleli okanye ukubonakala.
uyilo lweshawa emileyo
Ingumbono olungileyo ukuba iinkuni zifakwe kwicala lokukhanya ngakumbi xa igumbi ligcwele ukukhanya kwendalo. Kuyanceda ukubonelela ngomgangatho ngenkangeleko efanayo ngakumbi ngenxa yokuba ukukhanya akuyi kuwela ngokudibeneyo komntu ngamnye.
Nawuphi na umahluko okhoyo ukuphakama kweebhodi uya kubonakala kwaye unokwenza nesithunzi esincinci njengoko usiya kwicala elikhanyayo ukuya ekukhanyeni. Kuyacetyiswa ke ukuba ibaleke ngokuhambelana nomthombo wokukhanya ukuze ijongeke ngcono.
Amanqaku ahambelana noMgangatho woMthi onokuWathanda
Iindidi zeKhitshi loMgangatho - Ubunjineli boMgangatho oManzi kwiKhikhini - Umgangatho okhuni kuLuhlu lweeKhitshi kunye neNgxelo - Iindleko zoMgangatho woMthi
indlela yokuhlobisa i-arch yomtshato
ishawa yomtshato siyabulela uqaphele amagama
eyona mtshato mhle ngaphandle iingoma
Mhlophe kunye neti
yonke into oyiyo yiyo yonke into endiza kuyidinga